SAWIRO:Xukuno adag oo saakay lagu riday 9-Qof oo haweeney ay ku jirto. – Kismaayo24 News Agency
by admin 5th November 2019 074
Maxkamada ciidamada Qalanka sida ee Soomaaliya ayaa xukuno kala duwan oo xabsi ah ku riday 9-xubnood oo lagu eedeeyay in ay katirsanaayeen kooxda Al Shabaab gaar ahaan kooxda wax disha ee loo yaqaan Amniyaadka.
Xeer ilaalinta Maxkamada ayaana soo bandhigay dambiyada loo heesto xubnahan katirsan Al Shabaab, waxaana Maxkamada sheegtay in dadkan lagu hayo cadeemo muujinaya in xubno muhiim ah ka ahaayeen kooxda Al Shabaab.
Dadka Maxkamada lasoo taagay oo ahaa 9-xubnood ayaa waxaa ku jirtay haweeney la sheegay in hubka u keydin jirtay ragan loo heesto in ay katirsanaayeen kooxaha dadka dila ee Al Shabaab.
Xubnahan loo heesto in ay katirsan yihiin Al Shabaab ayaa la sheegay in ay ka howl gali jireen Degooyinka Yaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir sida ay cadeeyeen xeer ilalainta Maxkamada ciidamada.
Dadkan Maxkamada ku riday xukunada kala duwan ee xabsiga ah ayaa waxaa u furan in racfaan ka qaataan Xukunkan lagu riday sida uu shaaciyay Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Daawo: Muuqaal Beesha Mareexaan oo Kulan ay ku yeesheen Magaalada Cadaado ku dhaleeceyay Faragalinta ay Galmudug iy Guddiga Doorashooyinka ku haayan Soo xulida Aqalka Hoose
Tifaftiraha K24 30th October 2016 31st October 2016
Dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay xoojineyso Weerarada Cirka ee lagu qaado Alshabaab
Ahmed sudani 11th February 2018
Muuqaal: Maxaadan Ogeyn Oo Caabuudwaaq Ka Cusub (Warbixin Muuqaal Ah Ayaan Idinkaga Wadnaa)